UBRUCE SPRINGSTEEN: SIYA UKOYISA: IISESHONI ZOKUJONGA IIALBHAMU - IINDABA
Siza koyisa: Iiseshini zokuBona
Ingxwabangxwaba, ukuphakamisa umoya apho iBoss ijongana nengxwabangxwaba yemfazwe, iingxwabangxwaba, intlupheko kunye noxinzelelo ngaphandle kokuncama uvuyo okanye ukukhulula.
intsimbi kunye newayini ghost
Kwiphepha, Iiseshoni zokujonga kubonakala ngathi ngumbono owoyikisayo: abantu bendabuko baseMelika bahlawula imbeko ngokuhlonela omnye wabadlali be-rock'n'roll, abazama ukuguqula iingoma zomlilo zibe ziintshumayelo kwaye bathambise umbingeleli omkhulu uPete Seeger waseMelika. Endaweni yoko, le ngqokelela- ibandakanya iingoma u-Seeger azicule, kodwa akukho namnye ayibhalileyo- kukuphithizela, ukuphakamisa umoya, okwenziwe liqela elinamadoda ali-12 (ikatala, iharmonica, tuba, ivayolin, ilungu le-B3, ii-bass ezimileyo, ibanjo, ipiyano, amagubu, ikhodiyoni, itrombone, isaxophone, ixilongo, nokunye okuninzi) kunye nepakethi yeemvumi ezixhasayo. Mhlawumbi okuhlekisayo kukuba, uBruce Springsteen- omnye wabaculi beengoma abathandwa kakhulu eMelika- unyuka phezulu kwirekhodi egcwele iingoma ezibhalwe ngabanye abantu.
Vula Iiseshoni zokujonga , Ukugquma kweSpringsteen, iimfazwe, ukugcuma, kunye nokugungqa, kuvakala rhoqo njengoTom Waits (jonga ukukhwaza, amagama amoyikisayo kwi-'Erie Canal ') okanye kamva uBob Dylan. Umahluko ocacileyo kumbhobho we-Seeger ocacileyo, ocacileyo, kwaye ubuyisela amandla kumkhondo wamandulo waseMelika. Njengayo nayiphi na irekhodi elilungileyo loluntu, iiSeeger zeSeeger zijongana nengxwabangxwaba yemfazwe, iimbambano, intlupheko kunye noqhankqalazo, kodwa ikwenza oko ngaphandle kokuncama uvuyo okanye ukukhululwa (eneneni, ezona zizathu zibangele ukuba abantu baqale ukucula kwindawo yokuqala). Ingqokelela yeziphumo zivuyisa izandi zemizamo yakutshanje ka-Springsteen, kwaye isenokuba lelona cwecwe libalaseleyo nelikhuthazayo eliveliswe nguBruce kwisithuba seminyaka elishumi.
Ukwamkela ukushukuma kwesitalato i-E kwangoko kunye nokulahla ubungangamsha bo-2005 Iidemon nothuli , Iiseshoni zokujonga Culls ukusuka kwinkulungwane yesityebi, isithukuthezi isiko laseMelika, ukusuka kwibluegrass ukuya kwilizwe ukuya kwisigqi kunye neblues ukuya kwivangeli, rock'n'roll, Zydeco, Dixieland, kunye nokuninzi. USpringsteen ngumnombo ocacileyo wesiko lesiNtu, kodwa, njengoko ebhala kumanqaku erekhodi yeliner, lo 'ngumculo wekona yasesitalatweni, umculo weparlor, umculo wetavern, umculo wasentlango, umculo wesekisi, umculo wecawa, umculo we-gutter.' Okanye: Iiseshini zokujonga irekhodi leqela.
Ukumisela ikhathalogu ebonakalayo ka-Seeger, u-Springsteen ekugqibeleni wakhetha ukubethwa kweengoma ezikrelekrele, ezahluka-hlukeneyo, nezinamatheleneyo, ebonisa ukuba ugcina ukuqonda okunzulu kunye nokungaqondakali kwesiko labantu. Kutshanje ENew Yorker Iprofayile kaSeeger, uSpringsteen uthetha ngeengoma zesintu njengezixhobo ezinamandla okuba 'zizixhobo zobulungisa xa unxibelelene nokuqonda kwembali,' kwaye ubanga ukuba ukhethe le repertoire ngenxa yokuba, 'Yonke into endiyifunayo, ndiyifumene phaya.' Ngokufanelekileyo, ilizwi likaSpingsteen libonakala ngathi lenzelwe umkhondo onje ngala 'Siya Koyisa', apho utyikityo lomqondiso wakhe lusasaza ukungcangcazela, okujolise ekuthuleni nabona baphulaphuli bajonge ngethemba labo. Kubhalwe ngo-1905, 'i-Erie Canal' (itywinwe kakuhle ekucingeni kwanoma yimuphi umntwana ozelwe okanye okhuliswe entshonalanga yeNew York), uyayikrakra kwaye uyalalisa, kunye neebanjo ezithatyathwa ngamalungu, iintambo kunye nokuphazamiseka okungalindelekanga kweDixieland phakathi- Akunzima ukucinga ukuba onke amabala emidlalo akhwaza, 'Ibhulorho ephantsi, wonke umntu ezantsi!'
Ukuqhuma okuhle 'O Mariya Ungalili' kuqhekeka ngokuvumbuluka, ngaphambi kokuba iimpondo kunye namagubu akhabe kwaye ukukhwaza kukaSpringsteen kugqitywe ngumculo weemvumi ezixhasayo, izitho ezingena ngaphakathi nangaphandle, islippy mélange sesandi , enetyala eNew Orleans njengoko kunjalo eNewport. Ilizwi likaSpringteen linoburhabaxa kwaye liyinyani, wonwabile uqhawulo-mtshato kulwakhiwo olungaphezulu kwesitudiyo esihlasela umsebenzi wakhe wakutshanje, kwaye ngokuhambelana ngokugqibeleleyo kunye neqela lakhe elinobundlongondlongo, elimnandi. Wonke umntu olapha ukhululekile kwaye unxilile, kwaye akukho ndawo apho irekhodi le-quasi-live (irekhodi lenziwa kwiiseshoni zeentsuku ezintathu, zandulelwa kukuziqhelanisa) njengezinokuzukiswa.
U-Springsteen unomkhwa wokusonga iminyhadala yangoku kwiingoma zakhe ngaphandle kokucacisa ngokwaneleyo ukuba anciphise ivesi ixesha kunye nendawo enye. Akumangalisi ukuba ukungaphelelwa lixesha kuyahambelana ngokugqibeleleyo kunye neengoma ezindala Iiseshini zokujonga, kwaye, ukuba akukho enye into, eqinisekisa ukuba uBruce Springsteen wayengumntu olungileyo (kwaye mhlawumbi kuphela) ngumntu wale gig. Ngaphantsi kokukhutshwa komzimba kunokubhiyozela, Iiseshoni zokuBona zezona zinto zibalaseleyo zokufumana ukuba iifolks zaseMelika zizezona zixhobo zethu zintle. Konke kulapha: iiresiphi, imithandazo, izithembiso, uloyiko, ithemba kunye nokukhala.
iinkumbulo zokufikelela ngokungacwangciswanga daft punk
melody ibali likanelson
Dr luke kunye kesha
Ikonsathi yeariana grande e-uk
ihobe ubukumkani umhlwa